GeForce Experience Error code 0x0003 - Ahoana no manamboatra - Ahoana No
Ny traikefa Geforce dia ilay rindrambaiko izay manampy ny tompona karatra sary Nvidia rehetra.Ny fonosana rindrambaiko dia mitondra anao ny zava-drehetra mifandraika amin'ny sary. Fanampiny lehibe amin'ny fitantanana ny fampiasana ny karatrao izany.Ny fitaovana dia mitaky rindrambaiko hitazonana ny fahasalamany sy ny asany mety. Tsy ny mpamily ihany no ilainao amin'izao fotoana izao.
Ny rindrambaiko GeForce Experience dia mitondra tombontsoa maro samihafa amin'ny latabatra. Ny kaody hadisoana 0x0003 dia olana iraisan'ny mpampiasa vaovao maro izay manao tatitra. Mety hanahirana anao ny fandehanao milamina amin'ny fitaovanao. Amin'ity toro-lalana ity dia hiresaka amin'ny antsipiriany momba ity olana ity isika.
Inona ny kaody error GeForce Experience 0x0003?
Ho hita eo amin'ny fampisehoana anao ny kaody hadisoana rehefa tsy mandeha ny rindranasa Geforce. Ny mpampiasa sasany dia mety hiatrika hadisoana 0x0001 ihany. Ny olana dia mety hipoitra avy amin'ny fizotran'ny fanombohana. Ny traikefa Geforce dia tsy fampidinana an-tery fa mitondra fiasa fanampiny amin'ny latabatra.
Gamer sy mpamorona horonan-tsary maro no mahita azy io ho serivisy tsy maintsy ananana. Ny lesoka dia milaza aminao fa “Nisy zavatra tsy nety; andramo avereno ny PC-nao. ” Tranga mahazatra mety hiteraka olana maro izany. Antenaina fa afaka hamaha an'ity olana ity isika amin'ny alàlan'ny famantarana ny fotony.
Ahoana ny fomba hanamboarana ny kaody error GeForce 0x0003?
Fomba maro isan-karazany no ampiasaina ahafahanao manamboatra ity olana ity. Amin'ity toro-lalana ity dia hiresaka momba ireo dingana izay hanamorana ny fizotranao ho anao izahay. Misy vahaolana samihafa azonao andramana. Ny olana marobe dia mety hitondra anao olana noho ity sehatra ity. Ireto misy fomba sasany ahafahanao manamboatra ity code Geforce error code 0x0003 ity.
Atsaharo ny fampiharana:
Ny fijanonan'ny hery dia vahaolana vonjimaika ho an'ity olana ity. Afaka mampiasa mora foana ity hack ity ny mpampiasa mba hamahana haingana ny olana. Ireto ny dingana amin'ny fomba hanaovana izany.
1. Atombohy ny mpitantana ny lahasa
Afaka manomboka ny rindranasan'ny task manager amin'ny solosain'izy ireo ny mpampiasa. Tena mandaitra ny mahita ny fizotran'ny asa rehetra. Azonao atao ny mampiasa ny hitsin-dàlan'ny keyboard an'ny ctrl + shift + esc hanombohana ny mpitantana ny lahasa. Raha tsy izany, azonao atao ny manindry bokotra havanana amin'ny bara fitenenana hitondrana ireo safidy.
2. Atsaharo ny fizotran'ny traikefa Geforce
Amin'ny fizotran'ny mpikarakara andraikitra dia mila mitady ny traikefa Geforce ianao. Rehefa mihodina ao ambadika izy dia afaka mahita ny fizotrany amin'ny alàlan'ny fanodinana ny lisitra. Safidio ny fizotra ary kitiho ny safidin'ny lahasa farany. Hita eo amin'ny farany ambany ankavanan'ny efijery izy io.
Amazing! Ankehitriny dia azonao atao ny manakana ny rindranasa traikefa Geforce mora foana. Antenaina fa amin'ity indray mitoraka ity dia tsy hiatrika olana amin'ny fampiasana azy amin'ny solosainao ianao. Ireo mpampiasa dia afaka mampandeha azy amin'ny alàlan'ny tombontsoam-pitantanan.
2. Kaontenera Nvidia Telemetry
Nvidia dia manana serivisy telemetry hita amin'ny lampihazo. Ilaina amin'ny mpampiasa karatra sary rehetra izany. Raha tsy mandeha amin'ny solo-sainao ny serivisy dia misy olana anatiny. Ny olana dia azo alamina mora amin'ny hack kely. Ireto ny dingana hanombohana amin'ny fomba tanana ny fizotrany amin'ny fitaovanao.
Tsy maintsy mitsidika ny safidinao amin'ny findainao ianao. Ny mpampiasa dia afaka manery ny bokotra Windows + R hanomboka azy amin'ny solo-sain'izy ireo.Hanokatra mora foana ny safidy hazakazaka izy io. Azonao atao ny manoratra etoana ny baiko services.msc.
Ny mpampiasa dia afaka manindry ny safidy Nvidia Telemetry hanombohana azy. Ahitana ny safidin'ny container Nvidia Display amin'ny solosainao.
Azonao atao ny mamerina mamerina amin'ny laoniny ny serivisy mba hiasa tsara. Safidio ny safidy ary tsindrio ny restart. Ny efijery PC dia afaka mametaka kely nefa miasa milamina ao anatin'ny fotoana fohy.
Amazing! Ity dia vahaolana mora sy haingana hafa ho an'ny code error error xxxxx3x3x3.
3. Vaovao farany ny mpamily
Ireo mpamily Nvidia dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiantohana fa afaka mahazo ny fampiharana sy mandeha ianao. Rehefa ao ambadiky ny fanavaozana ny fitaovanao dia mety hisy ny olana amin'ny fampisehoana sy ny lozisialy. Ireto ny dingana hanavaozana ireo mpamily amin'ny alàlan'ny solo-sainao.
Mila mitsidika ny tranokala Nvidia amin'ny solosainao ianao. Afaka manao tsindrio ity rohy ity .
Hitondra anao mankany amin'ny pejy fametrahana mpamily manual ianao. Safidio ny karatra sary izay mihazakazaka ny fampirantianao. Misy lisitr'ireo karatra sary Nvidia ofisialy rehetra eto.
Azonao atao ny misintona ny lalao Geforce, mpamily vonona, avy amin'ity sehatra ity. Tsindrio ny bokotra misintona hahazoana ny mpamily ao amin'ny fitaovanao. Ny fananganana dia hangataka ihany koa ny fametrahana ny Geforce Experience. Ireo mpampiasa misedra olana dia afaka mampiasa ity fanamboarana ity hanamboarana ny rindrambaiko.
Ny fanavaozana dia afaka mamaha ny olana amin'ny fomba mora foana. Manoro hevitra anao izahay hampiasa an'ity sehatra ity mba hihazonana ny fahadiovan'ny karatrao sary.
4. olan'ny Windows
Indraindray ny milina Windows anao dia mety ho antony fototry ny olana ihany koa. Betsaka amintsika no mazàna hisoroka ny fametrahana ny fanavaozana. Afaka misintona azy ireo mandeha ho azy ny rindrambaiko, saingy miala amin'ny dingana famerenana indray isika amin'ny farany. Raha maharitra mandritra ny fotoana ela io, dia mety hiatrika vokatra lehibe ianao.
Ny vahaolana tsotra dia ny mampidina sy mametraka ny fanavaozana amin'ny solosainao. Ny mpampiasa dia afaka manindry ny toe-javatra hanamarinana raha misy fanavaozana miandry. Ny efijery an-trano eo amin'ny kiheba fampisehoana dia hampiseho aminao ny fomba hihazonana azy hihazakazaka.
Ny olan'ny tambajotra dia ahiahy lehibe ho an'ny mpampiasa maro. Zava-dehibe ny famahana ity olan'ny tambajotra ity hahazoana fidirana mora foana. Ity ny torolàlana momba ny famerenana amin'ny laoniny ny tamba-jotra amin'ny solosainao. Ireto misy ny dingana manaraka -
Ireo mpampiasa dia tsy maintsy mihazakazaka ny baiko avy hatrany mba hanombohana miasa amin'ny fizotrany reset. Ireo mpampiasa dia afaka manomboka ny fampiharana CMD amin'ny alàlan'ny fikarohana amin'ny safidy fanombohana. Tsy maintsy mihazakazaka ao amin'ny maody mpandrindra ianao.
Ny mpampiasa dia afaka mamerina ny tambajotrany amin'ny sehatra amin'ny alàlan'ny fanoratana an'io baiko io - netsh Winsock reset. Hamerina hametraka tanteraka ny toerana misy anao io. Ireo mpampiasa dia mila miditra tenimiafina WiFi sy angona hafa avy amin'ny rangotra.
Ankehitriny ianao dia afaka manandrana mihazakazaka ny rindranasa traikefa Geforce indray.
Mifanakalo hevitra momba ny sasany amin'ireo fanamboarana mora ampiasaina amin'ny alàlan'ity sehatra ity izahay. Afaka manandrana ireo ny mpampiasa ary mahazo ny valiny tsara indrindra. Misy vahaolana samihafa hamahana olana iraisana. Ny kaody Geforce error error 0x0003 dia tranga iray mahazatra. Ireo rehetra ireo no mety ho fanamboarana vitantsika, hamintina amin'ity lahatsoratra ity. Andramo izy ireo ary ampahafantaro anay izay vahaolana ho anao.
Fargo vanim-potoana 5: nofoanana na nohavaozin'ny Netflix?
disney plus amin'ny roku express
aiza no ahafahako mividy boaty fahitalavitra
jereo izao ny sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Internet
minecraft tsy misy fampidinana na fidirana
Playstation miampy mpamorona kaody fanandramana maimaim-poana
ahoana no ahazoako robux maimaim-poana